Ernesto Valverde Oo Weerar Ku Qaaday Saxaafada Dalka Argantina, Sababa La Xiriira Lionel Messi. – Gool FM
(La Liga) 20 April 2018 Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa ku weeraray saxaafada dalka Argentina, sababa la xiriira inay ka hadleen in Lionel Messi uu la dhibtoonayo dhaawac dhanka muruqa ah.
Saxaafada dalka Argentina ayaa xaqiijisay in Lionel Messi uu weli qabo dhibaatooyin dhanka muruqa ah, kaasoo kahor istaagay in xulkiisa Tango uu kala qeyb galo labadii kulan saaxiibtinimo ay la ciyaareen xulalka Italy iyo Spain, iyadoo ay dhakhaatiirta ay beeniyeen in xidiga koowaad ee Blugarana uu dhaawac qabo.
Valverde ayaa kahor kulanka finalka Copa del Rey ku sheegay shirkiisa jaraa’id: “Wararka wargeysyada dalka Argantina ee ku aadan in Messi uu la xanuunsanayo dhaawac dhanka muruqa ah, waa arin lagu qoslo”.
“Noloshayda, ma arkin inaad ku mashquusho xaalada ciyaaryahan, isla markaana aad ka fog tahay kumanaan kiilomitir”.
“Waxaan heysanaa shan fursadood ee aan ug guuleysan karno horyaalka, waana inaan ka faa’iideysanaa, sidaasi darteed waxaa muhiim inoo ah inaan guul ka gaarno Deportivo de La Coruna kulankeena soo aadan”.
"Tababaraha cusub ee Arsenal ma heli doono awoodii uu haystay Arsene Wenger"